I-C-star-iShanghai yoRhwebo lwaMazwe ngaMazwe lweziSombululo kunye neTrends malunga nokuThengisa, ilungu le-EuroShop yoRhwebo loSapho, ikhule ngokukhawuleza ukusukela oko kwaqala ngo-2015 kwaye iye yaba liqonga eliphambili kushishino lweentengiso kulo lonke elase China. I-C-star 2020 yayiphumelele ...
ngomphathi ku 20-02-16
Sityhala iintlobo ezimbini zemveliso eNtsha-Dynamic Curtain RGB LED Strip kunye neModyuli yeRGB yeModyuli ye-LED. Zonke izakhiwo zibalisa ibali, kwaye kunjalo nangaphakathi. Iipaneli zebhokisi yokukhanya ezinamandla zokwakha ezinamandla ezivela kwi-HYM Lighting zinokukunceda ukuba ulilonge elo bali. Uyilo lweemodyuli ...
Esi sisibane seCouleur sithathe inxaxheba kwi-EuroShop, ushicilelo lowe-2020 lwecandelo lentengiso elibaluleke kakhulu elinike ithuba leCouleur Lighting ukubonisa ukuvela kwayo kunye nezinto ezintsha. Sifuna ukubulela wonke umntu otyelele umnquba wethu e-Euroshop eDusseldo ...